मेलामा देशभरका महिला उद्यमी सहभागी हुँदैछन्ः संयोजक बराल (अन्तर्वार्ता) – Arthik Awaj
मेलामा देशभरका महिला उद्यमी सहभागी हुँदैछन्ः संयोजक बराल (अन्तर्वार्ता)
By आर्थिक आवाज २०७५ जेष्ठ २६ गते शनिबार ०३:५५ मा प्रकाशित
महिला उद्यमी विकास उपसमिति
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ महिला उद्यमी विकास उपसमितिको आयोजनामा पोखरामा महिला उद्यमी मेला २०७५ हुँदैछ । नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा जेठ ३० देखि असार २ गतेसम्म चल्ने मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलाको सहयोगी संस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महिला उद्यमी विकास समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नं. ४ महिला उद्यमी विकास समिति, पोखरा महानगरपालिका लगायत छन् । मेलाको उद्देश्य, मेला अवधिभर हुने गतिविधि लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर उपसमिति तथा मेलाका संयोजक सीता बरालसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
महिला उद्यमी मेला आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
महिलालाई आर्थिक सम्मृद्धितर्फ लैजानको लागि मेला आयोजना गरेका हौं । बेरोजगार महिलाालाई उत्पादन क्षेत्रका साथै उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढाउनु मेलाको मुख्य उद्देश्य हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गत महिला उद्यमी विकास उपसमितिले यस पटक आयोजना गरेको मेलाबाट महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउनेछ ।
मेलामा कति वटा स्टल रहन्छन् ?
मेलामा ७८ स्टल राख्दैछौं । महिलाले उत्पादन गरेका सामानको प्रदर्शनी बिक्री तथा वितरण मेलामा हुन्छ । जिल्ला प्रदेश तथा नेपाल भरका महिला उद्यमीको मेलामा सहभागिता रहँदैछ । हस्तकलाका सामानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपाल भरिका महिलाको मेलामा प्रतिनिधिमुलक सहभागिता रहने हुँदा यस पटकको मेलाको विशेष महत्व छ । करिब ४० वटा स्टल ४ नं प्रदेश भन्दा बाहिरका महिला उद्यमीका उत्पादनले भरिदैछन् ।
कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ?
स्थानीय कच्चा पदार्थबाट तयार पारिएका सामान मेलामा बढी प्राथमिकतामा रहनेछन् । सिस्नो, जलकुम्भी झार, रेशादार कपडा, ढाका लगायतबाट बनेका सामानका साथै च्याउ, लप्सीका विभिन्न परिकार मेलामा पाइन्छन् । क्रिस्टल, स्टोन लगायतबाट बनेका महिलाले प्रयोग गर्ने विभिन्न गहना पनि मेलामा रहनेछन् । महिलाले बनाएका विभिन्न चित्रकलाका सामान पनि मेलामा प्रदर्शन तथा बिक्री वितरण हुनेछन् ।
मेलाका विशेषताहरु के–के छन् ?
यस पटक आयोजना गरिएको मेलाको छुट्टै पहिचान छ । महिलालाई केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश तथा उत्प्रेरणा यो मेलाले दिनेछ । महिलालाई विभिन्न खालका तालिम तथा प्रशिक्षण पनि हामी प्रदान गर्नेछौं । व्यवसाय, कर तथा बैकिङ सम्वन्धी जानकारी पनि हामी दिन्छौं । व्यवसाय कसरी शुरु गर्ने ? कसरी ऋण लिने ? कर सम्वन्धी के कस्ता प्रावधान छन् ? लगायतका कुरा हामी जानकारी दिन्छौं । उत्पादनको बजारीकरण तथा व्यवसायीकरणको वारेमा पनि हामी सिक्न चाहने महिलालाई सिकाउछौं । हामीले यसको लागि प्रशिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं । विज्ञ समूहबाट प्रशिक्षण प्रदान हुनेछ ।
महिला भेला पनि हुँदैछ । उद्देश्य के हो ?
मेला अवधीमै हामीले महिला भेला पनि गर्दैछौं । देशको विभिन्न स्थानबाट आउने महिलाहरुको भेट हुने हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आउने समस्याका बारे छलफल तथा अनुभव पनि आदानप्रदान गर्नका लागि भेला प्रभावकारी बन्नेछ । मेला स्थलमा स्वास्थ्य शिविर पनि हामीले आयोजना गर्नेछौं । पाठेघरको क्यान्सर सम्वन्धी निःशुल्क परीक्षण हामीले राखेका छौं । मेलामा रमाइलो भन्दा पनि महिलालाई उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश तथा प्रेरणा मिल्नेछ । आँखा शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका सेवा पनि निःशुल्क प्रदान गर्दैछौं ।
मेलाको लक्षित समूह कुन हो ?
हाम्रो लक्षित समूह महिला नै हुन् । उद्यममा लाग्न चाहने महिलाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । महिला उद्यमीहरुको बीचमा अनुभव आदानप्रदान हुनेछ भने उद्यम सिक्न चाहनेहरुका लागि पनि विभिन्न विषयको जानकारी प्राप्त गर्ने स्थान मेला बन्नेछ । टोलको नेतृत्व गर्ने दिदीबहिनीले आफ्नो ठाउँमा महिलाको लागि कस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ त्यसको वारेमा जानकारी दिनुहुनेछ । महिलालाई उद्यमशील बनाउन हामी काम गरिहनेछौं । स्वाबलम्बी बन्न चाहने महिलालाई उत्प्रेरणाको साथै हामी विभिन्न तालिम प्रदान गर्नेछौं ।
महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु आवश्यक छ ?
उद्यमी महिलालाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न नीति नियम आवश्यक छन् । महिलामैत्री नीतिनियम आउनु आवश्यक छ । बैकिङ क्षेत्रले पनि महिला उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । सहज रुपमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।
महिला उद्यमी उपसमितिले अन्य के–कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ ?
समय समयमा उद्यमशीलता, व्यवसाय बिस्तार, कर शिक्षा लगायत विभिन्न विषयमा तालिम तथा सेमिनार आयोजना गरिरहेका छौं । विभिन्न तह तथा निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । महिला उद्यमशीलता विकास गर्न हामीले विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँग समन्वय गरी विविध कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं